I-TRF kwiphephandaba 2016 | Iimpapasho zeeReward Foundation kunye ne-intanethi
Ikhaya I-TRF kwi-Press 2016
Abeendaba baye bafumanisa iSiseko soMvuzo kwaye basasaza ilizwi malunga nomsebenzi wethu kubandakanywa: iiklasi zokuqwashisa izilwanyana; umnxeba osebenzayo, imfundo yesini esekelwe ebuchosheni kuzo zonke izikolo; imfuneko yokuqeqesha ababoneleli bezempilo be-NHS ekukhuselweni koonografi kunye negalelo lethu uphando kwizidalwa ezibonisa amanyala. Eli phepha libalaselisa ezinye zeempumelelo zethu kumaphephandaba.
Okthobha 2016. Iimpawu zikaMary Sharpe kolu luvo nguGqr Linda Hatch malunga neziyobisi ezingamanyala kunye nezesondo e-UK.
ICawe Times-uHlelo lwaseScotland, nge-21 Agasti 2016
Inkolelo esetyenziswe ngaphandle kweSkotshi ibonakala kwi-intanethi Apha. Ifuna umrhumo, nangona ungabhalisela amabali amabini asimahla ngeveki. Ikwayasetyenziswa kule ndaba yolwimi lwaseCroatia ibali eliphantsi kwesihloko NAVUČENI NA PORNIĆE Djeca od 11 u-ovisna su o nasilnom seksu ibhalwe nguAna Muhar.
I-imeyile yemihla ngemihla yaseScotland ilandelele ibali lamaXesha kabini. Kuqala kunikwe esi siqwenga silandelayo…
Ngosuku olulandelayo lisebenzise iimbono ezininzi zeSiseko soMvuzo kwinkokeli yalo…
Abafundi kwesinye sezikolo ezizimeleyo ezizimeleyo ezizimeleyo zibekwe ukuba zifumane "iklasi yokuqwashisa i-pornography" phakathi koyiko lomlingo.
Ikholeji ye-Fettes, ebalula uwayilunkulumbuso uToy Blair phakathi kwe-alumni yayo, uye wamema ingcali ye-intanethi ukudibana nabafundi kamva kulo nyaka.
Iza emva komzimba ophandayo wophando odibanise ukutyhila ngokugqithiseleyo koononophala kunye nokuphazamiseka kwempilo yengqondo nokungabi namandla.
Kwakhona kukho izibango zokuthi umlutha unokulimaza uphando, iinjongo zomsebenzi kunye nolwalamano, kunye nezilumkiso ezingeze zifikelele ekubukeni imifanekiso engekho mthethweni yokuxhaphazwa kwabantwana.
UMary Sharpe, igqwetha kunye nomsunguli we-Reward Foundation, uthando olukhuthaza ubudlelwane obunempilo, sele lunike iiklasi zokuqwashisa i-porn kwiGeorge Heriot ne-Dollar Academy e-Stirling.
Umthombo osondeleyo kwesinye sezikolo uthe iiseshoni "zinobuqhetseba kwaye zichanekileyo" malunga nemiphumo yokuxhatshazwa koononophelo, kunye nomnye umthombo othi "unomdla kwaye unomdla".
Kwaye le ndlela ibonakalise ukuba luncedo kakhulu kuba i-fettes-ehlawulisa iirhafu ze-£ 32,200 ngonyaka-inqume ukuyifumana.
U-Sharpe uthe umenyelwe ukuba akhulise iklasi kamva kulo nyaka. "Ezi zikolo ziyabona ukuba umonakalo obunobungozi buninzi obunokubakhombisa uonografi bungabakho kubafundi babo, ngokwempilo yabo yengqondo kunye nezifundo zabo," wongezela uSharpe.
Isiseko sakhe siqulethe iinkcukacha zamawaka amatyala aselula aseBrithani nakwamanye amazwe athethe ngesiphumo esiphumeleliyo somlutha wabo.
Ngokufanayo nokuthatha izidakamizwa, u-Sharpe uye walumkisa ukuba amazinga okunyamezela amaxilongwane akhula ngokunyuka ngokuqhubekayo kwaye umkhwa wabo unokwanda, kunye nabasebenzisi abafuna izinto ezibonakalayo ezibonakalayo ukuze bawanelise.
Amadoda amancinci angakwazi ukukhawuleza ngokunyuka kwi-porn-soft-core ukuya kwi-porn-hard core, i-pornographic fetish kunye ne-pornography yabantwana ababi, ukuze banelise imfuno yabo yeso siganeko, "wongezelela.
UCameron Wyllie, inqununu kaGeorge Heriot, wathi: "Kubaluleke kakhulu ukuba abantu abaselula bavelele kwiingozi zokujonga izinto ezingamanyala kwiinkwenkwezi zenzululwazi ezibonakala zibonisa ukuba ukusetyenziswa ngokugqithiseleyo kweentlophu zoonografi kuphazamiseka kwengqondo nangokwengqondo.
"Ubu bungqina bukhula kangangokuba ukungabonakali kokubonakala kwimizila engamanyala ngenxa ye-intanethi, efikeleleka ngokulula nge-smartphones kunye neepilisi, kukhwabanisa abantu abancinci kwaye bawashiye bengakwazi ukuvuswa neqabane lesini."
NgoJuni, i-NHS iLothian ebizwa ngo-Sharpe ukudibana nabasebenzi kwiKliniki yezempilo yezocwangco eKalmers ukuzisa abantu nge-porno-induced impotence.
Ingalo yase-UK yeHuffington Post yathumela oku kulandelayo ibali nge-22 ka-Agasti 2016. siqaqambise amagqabantshintshi amnandi avela kumfundi wase-USA.
I-Independent yenza kwakhona kwakhona, ngokukodwa, kwindaba yeCawe Times, ekhoyo Apha.
Ibali laphinde lafunyanwa ngokubanzi kwiimidiya zamazwe ngamazwe, kude kube njalo Vietnam kwaye Indoneshiya.
Ulungelo olusungulwa ngummeli lupapasha iphepha malunga neziphumo ezibangelwa ziintlophu zoonografi
Isisa esisekwe ngummeli sipapashe iphepha malunga nokusetyenziswa gwenxa kwe-intanethi.
Mary Sharpe, ilungu elingaqhelekanga IFomult of Advocates, ukushiya ukusebenza ukuseka Umvuzo weZiseko, uthando olujolise ekuphuculeni ukuqonda koluntu ngomjikelezo wesiphaluka wengqondo kunye nendlela edibana ngayo nokusingqongileyo kunye nokuphucula impilo ngokuqhubela phambili ukuqonda ukuphakanyiswa kokwakha uxinzelelo.
Kwiphepha elitsha Navy oogqirha kunye neSiseko soMvuzo, esithi "Ngaba iinthombe zoononopasho ze-intanethi zibangelwa izidakamizwa zesondo? Uhlolo kunye IiNgxelo zeKliniki", Kucetyiswa ukuba iindlela zobuchopho ze-intanethi zingabangela ubunzima bezesondo nakubabukeli bezempilo. Abo baqala ukusebenzisa ngexesha lophuhliso oluphambili lokubambela kunye nokusukela ebuntwaneni basengozini.
Abaninzi abameli kunye neenqwelo zamagosa ezikhokelayo baye bathetha ngokwabo ukwesaba kwabo ngenxa yempembelelo yoononografi malunga nokuziphatha kwabantu abatsha News24.com - Izindaba Ezintsha.
UNksz Sharpe uthe ucinga ukunyuka kolwaphulo-mthetho ngokwesondo "inxenye iya kuqhutywa yintsebenzo yokunyanzelisa i-intanethi".
Wongeza ngelithi: "Akungabazeki ukuba ukuxhaphazwa kwabantwana bembali kunye nabanye abantu abaza phambili ukubika ukuhlaselwa ngokwesondo badlala indima njengoko kubonwa ngcono ngamapolisa, kodwa ngaphantsi kwawo, konke ukunyanzelisa i-porn kunye nokuphulukiswa kweengcamango zobuchopho kunye nolunye umlutha- utshintsho lobuchopho obuhlobeneyo kufuneka lube nendima.
"Oku kufuneka kuthatyathwe ngamagosa olwaphulo-mthetho ngokubambisana namagosa emfundo kunye nempilo ukuba siza kubona nayiphi na inciphiso kule ndawo yolwaphulo-mthetho."
Agasti 22, 2016. Ukuphucula izikolo
Igqwetha uMary Sharpe libethe emxholweni emva nje kokuba kuvele ukuba isikolo sangaphambili sikaTony Blair siza kubonelela ngeeklasi "zokwazisa amanyala" phakathi koloyiko malunga neziphumo ezibi zokuziphatha gwenxa ngokwesini.
Ikholeji yaseFettes e-Edinburgh, esinye sezona zikolo zikarhulumente zikhetheke kakhulu e-UK, imeme u-Ms Sharpe, umsunguli we-Reward Foundation charity, ukuba athethe nabafundi phaya ekuqaleni konyaka olandelayo.
Kwaye ngoku kuvele izicwangciso ukuzazisa ezo nkalo apha ngenzame yokukhupha abafundi beefoto zoonografi ngokubaxwayisa malunga nemiphumo ebangelwa ukuxhatshazwa kwabo.
Ukuthetha neBelfast Telegraph, uDarryl Mead, umyeni kaNks Sharpe kunye nosihlalo weReward Foundation, ekhuthaza ubudlelwane obunempilo, uxelele iBelfast Telegraph ukuba iNyakatho yeIreland ikwi-ajenda.
“Mna noMary senza intetho-ntetho ezikolweni kwaye sinomdla wokwenza iiseshoni zoqeqesho kwiphondo liphela,” utshilo uGqirha Mead.
“Okwangoku asikawafumani amaziko athile, kodwa i-Northern Ireland ikuluhlu lwezinto esiza kuzenza kwaye sivulelekile ekufundiseni kwizikolo eziziiprayimari, eziziisekondari negrama.
"Sonwabile ngokunika amakhwenkwe namantombazana iiseshini ezohlukeneyo kuba baneemfuno ezahlukeneyo xa kufikwa kumba wokufunda ngamanyala."
UNks Sharpe uxelele i-Nolan Show yeRadio Ulster izolo, nangona, ngoku bajongene ikakhulu nabaneminyaka eli-16 neli-17 ubudala, bajonge ukuqala ukufundisa abantwana kunyaka wabo wokugqibela kwisikolo samabanga aphantsi.
"Uphando lubonisa ukuba abantwana abaphakathi kweminyaka baqala ukukhangela iifoto ze kwaye izinto ezinjalo zineminyaka eyi-10," utshilo.
"Namhlanje i-intanethi ibanika yonke into ngokucofa imouse okanye ukuswayipha ngomnwe, ke ukuba sifuna ukukhusela ubuchopho babantwana xa bekwimeko entle, kufuneka sibazise ngoku."
Ummeli wathi nangona "ukujonga iphonografi kunye nobunqunu ngekhe kwenzakalise", bekukho ingozi yokuba ibe lisango lezinto ezibonakala ngokucacileyo nezinokonakalisa.
Ingqondo iyakruquka yinto ethile emva kokuba ibonwe amatyeli ambalwa kwaye ifuna izinto ezintsha kwaye kulula kakhulu ukuba inyukele kwi-hardcore ye-porn kunye ne-porn enogonyamelo kwaye abantwana bavuswa yile nto, utshilo. "Bafunda zonke izinto ezingalunganga ezivela kwi-Intanethi kwaye ziyabonakalisa."
Uxinzelelo kunye ne-ADHD (ingqalelo yokulahleka kwengxaki yokuxhatshazwa kwempilo) yimiba emibini yemicimbi yengqondo yengqondo uNksz Sharpe exhunywe kwiimifanekiso engamanyala.
Uye wathetha nangengxaki ekhulayo yokungasebenzi kakuhle kwamadoda phakathi kweminyaka eyi-20 "kuba bebejonge iphonografi kulutsha".
"Bayeke ukonwaba ngamaqabane abo okanye ngokuvuselela inkanuko ngokwesondo kuba iingqondo zabo zisetyenziselwa ukuvuselela i-intanethi," utshilo.
"Endaweni yokufunda ngendlela oncokola ngayo namantombazana kwaye ubambe izandla kwaye wenze onke amanyathelo aqhelekileyo, bayavezwa zizinto ezigabadeleyo."
Ilungu le-DUP uNelson McCausland lamkele inyathelo lokwenza ukuba iiklasi zifumaneke kubantwana basekuhlaleni, esithi "kulungile ukuba abantu abancinci mabafundiswe ngobungozi bamanyala".
"Kukho ulwazi olukhulu namhlanje malunga nobungozi bezinto ezinjalo kunye nendlela ezichaphazela ngayo ingqondo yomntu," utshilo. "Nantoni na enceda abantu abatsha ukuba baphile ubomi obusempilweni kwaye bazi ngobungozi obunjalo yinto entle."